Sarintany ny lakile Bixby miaraka amin'ny Google Assistant miaraka amin'ny fampiharana Tasker | Androidsis
Ahoana ny fakana sarintany ny lakile Bixby miaraka amin'ny Google Assistant amin'ny Samsung Galaxy misy Tasker anao
Manuel Ramirez | | Android cheat, Tutorials
Sarintany miaraka amin'i Google Assistant ny lakile Bixby Tsy avelanao hamboarina amin'ny fanavaozana Bixby vaovao notontosain'i Samsung andro vitsy lasa izay. Fa afaka manao izany amin'ny Tasker ihany koa isika. Io fampiharana malaza io mba hamerenany automatique ny zava-drehetra amin'ny finday Android raha mbola haintsika ny mitantana azy tsara.
Raha milaza isika fa afaka manao izany amin'ny Tasker, dia satria efa nampianarinay anao ny fomba amboary ny bokotra Bixby handefasana ny Google Assistant raha tsy izany. Ary tahaka an'i Tasker iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra ao amin'ny fiarahamonina Android, mendrika tokoa ny fampiasana an'io takelaka io tsara indrindra rehefa namoaka ny kinova beta mamela azy ity.
1 Zavatra vitsivitsy alohan'ny hanaovana sarintany ny lakile Bixby
2 Ahoana ny fandrafetana ny lakile Bixby miaraka amin'i Google Assistant amin'ny alàlan'ny Tasker
Zavatra vitsivitsy alohan'ny hanaovana sarintany ny lakile Bixby
Voalohany indrindra, mampitandrina anao izahay fa raha te-hanao saritany ny lakile Bixby miaraka amin'ny Google Assistant dia tsy maintsy manana ianao nohavaozina ny mpanampy Bixby avy amin'ny Samsung Store. Ary marina fa raha azo atao ity dia tsy maintsy manana Samsung Galaxy miaraka amin'ny One UI ianao, ilay interface vaovao miaraka amin'ny Android Pie ary ireo tompon'ny Galaxy S8, S9, Note 9 ary ireo efa manana ny tànany dia efa afaka mankafy marika Galaxy S10 vaovao.
Olana iray hafa ny fahaizana mampiasa Tasker rehefa dikan-karama izy io. Misaotra fa ity fiasa vaovao ity hahafahana manome ny Google Assistant amin'ny bokotra Bixby dia azo alaina amin'izao fotoana izao ao amin'ny beta, mandray anjara amin'izany dia azonao atao ny misintona Tasker hampiasa Assistant avy amin'ny Bixby. Ary tsy manahy momba an'io fampandrenesana mavesatra sy maharitra io izay mety hivoaka rehefa vonona Bixby miaraka amin'ny Assistant sy Tasker ianao, satria azonao atao ny manafoana azy raha tsindrio eo amin'ny bara misy anao izany.
Izany dia nilaza, tadidintsika ihany koa izany Nanavao an'i Bixby Samsung mba hahafahanao manamboatra hetsika roa. Iray ny iray gazety tokana hanokafana rindrambaiko na baiko Bixby, raha ny iray kosa dia milina fanindriana roa ho an'ilay zavatra mitovy. Mazava ho azy, raha manao gazety lava ianao, dia halefa miaraka amin'ny mpanampy azy i Bixby; izay raha ny fanazavana, saika toa an'io no manery antsika hamelona an'i Bixby ao amin'ny terminal hahafahantsika mandefa fampiharana na iza na iza toa ny google gcam dia mety ho.
Ahoana ny fandrafetana ny lakile Bixby miaraka amin'i Google Assistant amin'ny alàlan'ny Tasker
Ny zavatra voalohany hataontsika dia zahao fa nanavao an'i Bixby izahay:
Mandeha any amin'ny folder Samsung apps izahay.
Manokatra ny Store Galaxy izahay.
Y eo amin'ny faritra ambony havanana dia tsindrio ny rindranay hanamarina ny fanavaozana.
Mila manavao ireo rehetra mifandraika amin'ny Bixby izahay.
Ankehitriny dia hametraka ny Tasker beta isika.
antsika Mandeha amin'ny tranokala Tasker izahay ary any no ahafahantsika miditra amin'ny rohy mankany amin'ny beta. Na dia hanavotra anao ity dingana ity aza izahay handeha mivantana.
Ny rohy ho an'ny mandray anjara amin'ny Tasker beta: East.
Efa mandray anjara amin'ny Tasker beta dia mametraka ilay fampiharana avy amin'ilay rohy mitovy ihany no ho hitantsika.
Ny dingana manaraka dia ny mankany amin'ny fikirakira ny Bixby lakile tendreo ny fampiharana noforonina «Tasker Secondary».
Mandeha amin'ny Settings> Advanced Features> Bixby Key izahay.
Mandresy isika «Tsindrio indroa ny ...» ary avy eo tsindrio Mampiasa paompy tokana.
Handeha amin'ny efijery manaraka izay ahafahantsika misafidy eo amin'ny «Open application» na «Manatanteraka baiko haingana».
Misafidy izahay Sokafy ny Application ary ao anaty lisitra izay miseho dia mifidy «Tasker Secondary» izahay.
Farany, hanao izany isika ampifanaraho i Tasker hanomezana fanokafana ny baikon'ny feo (izay mpanampy Google fotsiny ao Tasker).
Manokatra Tasker izahay.
Ao amin'ny kiheba "Profiles" dia tsindrio ny bokotra + hita eo ankavanan'ny farany.
Misafidy izahay «Hetsika» ao amin'ny fikandrana vaovao miseho.
Ao amin'ny lisitra vaovao dia misafidy "Tasker" isika.
Ary tamin'ny hetsika Tasker nosafidianay "Nisokatra ny fampiharana faharoa".
Amin'ny efijery manaraka omentsika momba ny bokotra + manampy hetsika.
Ao amin'ny lisitry ny hetsika mitady "feo" izahay ary mifidy ny "baikon'ny Feo" amin'ny valiny izahay.
Tsindrio ny lalao amin'ny ankavia ambany ary avy eo miverina mamita ny fizotrany rehetra isika
Efa nivoaka ny Tasker, raha manindry isika amin'ny bokotra Bixby, hanomboka avy hatrany ny Google Assistant hahafahanao mibaiko ny iray amin'ireo baiko mahasoa indrindra an'ity mpanampy lehibe ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fakana sarintany ny lakile Bixby miaraka amin'ny Google Assistant amin'ny Samsung Galaxy misy Tasker anao
Idle Hero TD dia fiarovana tilikambo izay ahafahanao miatrika mpilalao hafa sy maro hafa
OPPO F11: Ny kinova kely an'ny F11 Pro